Nezvedu - Jinan Lide Rubber & Plastic Co, Ltd.
Jinan Lide Rubber & Plasta Co.Ltd.inowanikwa muPingyin Yushan Industrial Park mudunhu reShandong.Mountain Tai iri kumabvazuva kune kambani, uye kumaodzanyemba ndiko kuguta reConfucius.JinanLide yakavambwa muna 2013, mabhizimusi ake makuru ari kugadzira, machining uye kushambadza epurasitiki nerubatsiro. Iye zvino, kambani iyi yakagadzira 9 dzakateerana nezvigadzirwa zvinopfuura zana, zvinoshandiswa zvakanyanya muminda dzakasiyana.
Iyo yekumhanyisa kwekutsvagisa zvigadzirwa zvitsva zvekambani yedu zvinokurumidza, nekuti isu tine nyanzvi dze 3D vagadziri uye vatengesi. Takatenga akati wandei CNC michina yekuumba, zvinotora anenge mazuva mashanu kuti gadzira gadzira, uye zvinotora mazuva gumi kuti samples yakagadzirira.Our kambani inogona kuburitsa yakakurumbira yekuwedzera marabha majoini uye zvakare kugadzira OEM zvigadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa vatengi.
Iyo kambani ine zvizere zvekuedza zviridzwa, zvakaita se rotorless curometer, axial uye yakatevera kufamba kwekunyoresa kumuchina, angular yekufambisa tester, vacuum tester, abrasion muchina, elektroniki universal test muchina, hot-aging oven, rubber-rebound tester, Shore Durometer, Rubatsiro rwekumanikidza Yechigarire Defform Tester etc.
Parizvino, isu tave neEC, kubvumidzwa kwakaitwa naWisas uye ISO9001 chitupa.Tichaenderera kuronga zvitsva zvinotenderwa zvinoenderana nezvinodiwa nemisika.
Kubva pakavambwa kambani, tinosimbirira pane mutemo urikugara pamhando uye kusimudzira uchivimba nemusika wakanaka mukurumbira. Iyo kambani inotora imwe yakazara yezvigadzirwa zvekugadzira nekuvandudza zviridzwa, uye iyo kambani inotarirawo tekinoroji, kudzidziswa uye kugona.
Saka, iyo kambani yakagadzira yakakwirira-inoshanda-yepamusoro-control system uye zvigadzirwa zvekushambadzira network. Iyo yakagadzirwa inogadzirwa inotemerwa pamusoro penyika dzepasi rose uye yenyika dzepasi rose.Zvino zvinhu zvedu zvinotumirwa kune nyika dzinopfuura makumi maviri munyika, dzakadai Us, Colombia, HongKong, Singapore, Vietnam, Turkey, Thailand, Algeria, Egypt, Italy , etc. Zvigadzirwa zvedu zvinowana mukurumbira wakanaka kubva kune vatengi vekunze uye vekunze.
Chirevo chebasa rekambani yedu ndechekuwana vatengi nekugadzira zvigadzirwa zvekutanga-mhando, yekutanga basa, kutanga-kirasi maneja, nemweya wekuvandudza, uye isu ticharamba tichigutsa zvinodiwa nevatengi vedu kuburikidza nekutsvagisa tekinoroji nyowani yekugadzira, zvigadzirwa zvitsva, zvigadzirwa zvitsva uye tekinoroji nyowani.Tinoshandira pamwe nevatinoshanda navo pamabhizinesi zvichienderana nekubatsirana.Tinogamuchira nemufaro vatengi vanoremekedzwa kutishanyira uye kutaurirana nebhizinesi.
Bata isu kuti uwane rumwe ruzivo